Fiesta de los Patios de Córdoba, ifuru mara mma nke oge opupu ihe ubi | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Córdoba, omenala
Ememe Patios de Córdoba bụ otu n'ime ihe izizi kachasị nke a na-eme kwa afọ n'ókèala Spanish. Ọ nwere njikọ chiri anya primavera, mgbe ahịhịa ruru oke zuru oke, ekwupụtala banyere ya Nnọọ Mmasị nke Mba.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, na 2012 ọ natakwara ọdịiche nke Ihe Okike mmadu n'ọhịa nke ọdịnala site n'aka UNESCO. Ma ọ bụ na ọ bụ oke mbuli elu nke ịma mma nke okike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Patios de Córdoba, anyị na-agba gị ume ka ị nọgide na-agụ ihe.
1 Obere akụkọ banyere emume Patios de Córdoba
2 Kedu ihe ọ bụ?
3 Kedu mgbe a na-eme Fiesta de los Patios de Córdoba?
4 You kwesịrị ịkwụ ụgwọ ntinye?
5 Mmeju ihe
6 Kedu ka esi abanye Córdoba?
Obere akụkọ banyere emume Patios de Córdoba
Ememme a sitere na idiosyncrasy nke ụlọ Cordovan a na-ahụkarị. Ọnọdụ ihu igwe dị ebube mere ka ndị Rom buru ụzọ ma ndị Alakụba mechara wuo ụlọ ha gburugburu a okoneyo okụre ebe ha mere otutu ulo ha.
Otú ọ dị, mbipụta mbụ nke ememme a mere 1921. E kwughachiri ya ruo afọ isii mgbe nke ahụ gasịrị, mana ọ malitere ịmalite na 1933, mgbe ogige iri na isii banyere asọmpi ahụ.
Mgbe agha obodo kwụsịrị, eweghachitere ya na 1944. Site na mgbe ahụ, uru nke onyinye ahụ rịrị elu, ebe agbakwunyere nyocha ọhụụ dịka ụdị okooko osisi dị iche iche na ọkụ ọkụ.
Dị ka anyị gosiri, na 1980 e kwupụtara Ememe nke Mmasị Njem Nleta Mba na na 2012 Intangible Heritage of Humanity. Ugbu a, Fiesta de los Patios de Córdoba bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na Andalusia niile ma ọ na-eweta ọnụ ihe karịrị otu nde ndị ọbịa na-achọ ịnụ ụtọ okooko osisi mara mma nke patio.
Jakị Cordoba nwere ifuru chọọ mma
Dị ka aha ya na-egosi, Fiesta de los Patios de Córdoba bụ a ifuru zoo. Ejiri ịchọ ụlọ mara mma nke etiti ụlọ ndị mere eme akwukwo nri decorations Nke mara oke mma. Osisi vaịn, ite ifuru na ọtụtụ ihe ịchọ mma ndị ọzọ na-eme ka nzukọ ndị ịchọ mma mara mma dabere na okike.
Isi ógbè ebe ị nwere ike ịga na patio ndị a bụ nke Old Alcazar, bụ́ nke dị kpọmkwem n’etiti Alcázar na chọọchị San Basilio; site na Santa Marina, gburugburu Magdalena na San Lorenzo; nke Mosquelọ alakụba; nke Ahịa, nke bụ otu n'ime ndị ochie, na nke Analọ Viana. Nke ikpeazụ kwesiri ka akpọtụrụ ya iche, ebe ọ bụ naanị n’obí eze nwere ogige iri na abụọ, nke ọ bụla jiri ụdị ifuru ya chọọ ya mma.
N’aka nke ọzọ, e nwere patios dị iche iche. Arefọdụ ndị ọzọ dara oké ọnụ, nwe otu ụlọ ha na-enwekarị cloister ma na-ete ya ma ọ bụ n’elu ala Mozis. Ma ndị ọzọ, ha nọ n'ime ụlọ nke ọtụtụ ndị agbata obi ma na-adịkarị na ala abụọ nwere mbara ihu na patios onwe ha. Akụkụ ikpeazụ a na-enye gị ohere ịchọ ha mma karịa iji ohere ndị ahụ eme ihe.
N'ihe gbasara nke a, ị kwesịrị ịmara na ndị bi n'ebe obibi ahụ na-esonye n'asọmpi ahụ. Ọ bụ ha bụ ndị na-ahụ maka imezi patio ha. E nwere ụzọ abụọ: ogige ọdịnala na nke ogige ụlọ nke oge a. Mana ha nwekwara ike ịdenye aha na mpụga asọmpi ahụ, nanị iji gosipụta ọmarịcha ịma mma ha n'ihu ọha na-abịa nnọkọ ahụ.
Ọganiihu nke emume Patios de Córdoba n’etiti ndị bi n’obodo ahụ ga-eme ka ị mata eziokwu ahụ bụ na ihe dịka ụlọ iri ise na-abatakarị asọmpi ahụ. Na ndị a, a na-agbakwunye ndị ọzọ iri ma ọ bụ iri na abụọ na-anaghị eso asọmpi ahụ.
Patio gbadara maka oriri ahụ
Kedu mgbe a na-eme Fiesta de los Patios de Córdoba?
Dị ka anyị gwara gị, ezumike a bụ nke ọma n'oge opupu ihe ubi. Otú ọ dị, e bipụtara mbipụta ikpeazụ na ọdịda. Ọrịa na-efe efe Covid-19 mere ka a yigharia ya rue Ọktọba, ọkachasị n’etiti 8th na 18 nke ọnwa ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enweghị akụkọ, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ mbipụta 2021 na-esote uwe eji egwu mmiri. Datesbọchị enyere n'ime ya sitere na nke atọ ruo na nke iri na isii.
You kwesịrị ịkwụ ụgwọ ntinye?
Iji nwee ọmarịcha osisi mara mma nke patios nke Córdoba, ị gaghị akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ mbata. Nleta bụ free, ebe ọ bụ na mmasị nke ndị sonyere bụ iji merie asọmpi ahụ, kamakwa igosi ọrụ ịchọ mma ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa leta ha tinyere onye ndu obodo. Nke a ga-agwa gị nke ọma gbasara akụkụ niile metụtara oriri ahụ ma kpọga gị n'akụkụ kachasị mma.
N'otu oge a na-eme ememme Patios de Córdoba, okirikiri nke mmemme ndiife nke na-eme ka ndị ọbụ abụ ma ọ bụ ndị ịgba egwu kachasị mma na mpaghara ahụ ọnụ. A na-ahazikwa ihe ụtọ nke ngwaahịa ndị a, ọkachasị tapas na mmanya sitere na aha mmalite. Montilla Moriles.
Banyere ndị nke mbụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụtọ Gazpacho, kamakwa ọmarịcha Salmorejo, ntu mpekere ma ọ bụ efere nke ebule. Nke a bụ stew nke poteto nwere galik egheere na mpekere achịcha nke a na-ejikarị akwa eghere eghe.
Na imecha uto gị nke Córdoba gastronomy, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ eghe okooko osisi, nke aha dabara adaba maka ndị otu a na-ekwu. Agbanyeghị, ọ bụ maka ntụ ọka wit, akwa na kuki anise. Ma ọ bụ ị nwekwara ike ịhọrọ achicha cordovan, nke ejiri ntutu ntutu na puff achịcha mee.
Patio na-ekere òkè na asọmpi ahụ
Kedu ka esi abanye Córdoba?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ememme Patios de Córdoba, ị kwesịrị ịma ka esi aga ebe a na-akpọ Caliphal City. Otu ụzọ kacha mma iji mee nke a bụ ụgbọ okporo ígwè. Córdoba nwere akara ọsọ dị elu nke jikọtara ya na ụgbọ oloko na Madrid, Barcelona na obodo ndị ọzọ Andalus dị ka Seville, Granada ma ọ bụ Malaga.
Banyere njem site okporo ụzọ, i nwere mmasị ịmara na, ọ bụrụ na ị si Madrid ma ọ bụ Seville rute, isi ụzọ bụ Ugwu Away A-4. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eme ya site na mpaghara Levantine, dịka ọmụmaatụ si Valencia, ụzọ kwesịrị ekwesị nwere A-3, A-43 na A-4 n’onwe ya. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-esi n'ụdị ọdịda anyanwụ, ụzọ kachasị mma bụ Mba 432.
Na mmechi, Oriri nke Patios nke Córdoba ọ bụ mgbawa nke ihe mara mma. Ọ bụ ihe magburu onwe ya ịhụ oghere dị iche iche nke eji okooko osisi na ihe ịchọ mma osisi ndị ọzọ chọọ. Ọ bụrụ na ị gaa obodo Andalusia ka ịnụ ụtọ ya, ị gaghị akwa ụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Córdoba » Oriri nke Patios nke Córdoba